वीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रौनियार बर्खास्त (पत्र सहित) | Makalukhabar.com
वीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. रौनियार बर्खास्त (पत्र सहित)
फागुन ३०, काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिलाई बर्खास्त गरिएको छ ।
गत फागुन १६ र १७ गते बसेको प्रतिष्ठानको ४२ औं सिनेटले सर्वसम्मत रुपमा उपकुलपतिलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेकोमा प्रतिष्ठानका कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदर गरेका छन् ।
२६ गते प्रधानमन्त्री ओलीले उपकुलपति डा. राजकुमार रौनियारलाई पदमुक्त गरेको स्रोतको दावि छ ।
प्रतिष्ठानका सहकुलपति समेत रहेका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवको सिफारिसका आधारमा कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रौनियारलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेका हुन् ।
सिनेट बैठकको निर्णय कार्यान्वयनको लागि सहकुलपतिले प्रधानमन्त्री समक्ष सिफारिस गर्ने र सोही आधारमा निर्णय हुने प्रावधान रहेको छ ।
प्रतिष्ठानमा करिब दुई वर्ष उपकुलपति भएका डा. रौनियारले पदीय आचरण अनुरुप काम नगरेको, विभिन्न खरिद तथा ठेक्कामा मोटो कमिसन खाएर भ्रष्टाचार गरेको लगायत आरोप छन् ।
मकालु खबरले यस विषयमा डेढवर्ष देखि नियमित रुपमा फलोअप गरिरहेको थियो ।
मधेशमा राष्ट्र विखण्डनको मुद्दा अन्त्य भयाे, अब विकासतर्फ अग्रसर: मन्त्री पण्डित
खैरहनीका डकर्मीलाई भुकम्प प्रतिरोधी तालिम
जेष्ठ ६, चितवन । खैरहनी नगरपालिका भित्र रहेका डकर्मीहरुलाई भुकम्प प्रतिरोधी निर्माण सम्वन्धी तालिम दिईएको छ । खैरहनी नगरपालिकाले गेटवे इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी काठमाडौको प्राविधिक सहयोगमा यहाँका डकर्मीहरुलाई एक हप्ता सम्म तालिम दिएको हो । तालिमको समापन गर्दै खैरहनीका मेयर लालमणी चौधरीले प्रतिस्पर्ध... जारी राख्नुहोस...
सत्तारुढ दल स्टालिन/पोलपोटको एकमनावादी धंगधंगीबाट अझै ग्रसितः बाबुराम भट्टराई
जेठ ६, काठमाडौं । समाजवादी पार्टी, नेपालका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को मानसिकता स्टालिन र पोलपोटको एकमनावादी धंगधंगीबाट अझै ग्रसित देखिएको आरोप लगाएका छन् । सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मिडिया काउन्सिल, मानव अधिकार आयोग, सुरक्षा परिषद् लगायत विधेयकविरुद्... जारी राख्नुहोस...
नेपालकै ठूलो डेण्टल क्याम्प सम्पन्न
जेठ ६, काठमाडौं । नेपालकै ठुलो डेण्टल क्याम्प सम्पन्न भएको छ । कान्तिपुर टेलिभिजनबाट प्रशारित nepalspell bee को तेस्रो अडिसन राउण्डसँगै नेपालकै ठूलो डेण्टल क्याम्प समेत सम्पन्न गरेको हो । कोलगेट डेण्टलको मुख्य प्रायोजनमा भएको डेण्टल क्याम्पमा देशभरका ८ हजार २ सय ७७ जनाको निःशुल्क दन्त परिक्षण गरिएक... जारी राख्नुहोस...